गठबन्धनमा खटपट !- समाचार - कान्तिपुर समाचार
गठबन्धनमा खटपट !
चैत्र ३, २०७८ गंगा बीसी
काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनबीच स्थानीय तहका साथै प्रदेश र संघको चुनावमा पनि तालमेल गर्ने कसरत भइरहेका बेला कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आपसमा टीकाटिप्पणी गर्ने क्रम बढेको छ । कांग्रेसमा खास गरी शेखर कोइराला समूहका नेताहरूले एक्लै चुनावमा जानुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भने माओवादी नेताहरूले पनि कांग्रेसमा अहंकार बढेको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पछिल्ला अभिव्यक्तिमा स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्ने कुरा उति प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । उनले बुधबार माओवादीको उपत्यका, सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेश तथा प्रवास समन्वय समितिको संयुक्त वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षणमा कार्यकर्तालाई एक्लै चुनाव लड्नका लागि तयार रहन निर्देशन दिए । ‘गठबन्धन कायमै रहन सक्छ तर हामी आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्‍यो । हामी २०६४ को जस्तो माहोलमा फर्किनुपर्‍यो,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘गठबन्धन गरेर जितिहालिन्छ भन्ने भरमा नपरौं ।’
माओवादी नेता वर्षमान पुनले कांग्रेसका केही नेतामा गठबन्धन भएका पार्टीका नेताहरूलाई हेप्ने प्रवृत्ति देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘हामीले सडकको कांग्रेसलाई सत्तामा पुर्‍याएका छौं । सत्तामा पुगेको कांग्रेसका केही नेताले अहंकार देखाइरहेका छन् । उनीहरूमा सत्ताको उन्माद देखिन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय निर्वाचनमा उनीहरू नराम्ररी पछारिनेवाला छन् ।’ नेता पुनले स्थानीय निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेलको ढोका बन्द भइनसकेको उल्लेख गरे । ‘हामी घुँडा टेकेर तालमेल गर्नुपर्‍यो भन्न कसैलाई जाँदैनौं । हाम्रो आफ्नै शक्ति छ,’ उनले भने, ‘दुवैतिर (गठबन्धन र एमाले) सँग तालमेल हुने ठाउँमा हामी खुला नै छौं ।’ केही समयअघि अध्यक्ष दाहालले पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवादको ढोका बन्द नगरेको बताएका थिए ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने राष्ट्रिय स्तरमा माओवादी केन्द्रसँग तालमेल हुने सम्भावना नरहेको बताए । ‘माओवादीमा स्थानीय चुनावलाई लिएर मनोवैज्ञानिक डर छ । त्यसैले माओवादी नेताहरूले एमालेसँग तालमेलको कुरा गरिरहेका हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्तरमा चुनावी तालमेल नभए पनि स्थानीय तहमा कहींकतै विशिष्ट स्थिति हेरी समीकरण बन्न सक्छ ।’ ओलीका अभिव्यक्तिले पनि माओवादीसँग तालमेल भइहाल्ने संकेत गर्दैन । एमाले नेता घनश्याम भुसालले कान्तिपुरमा लेखेको ‘कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य ः एकता वा सत्यानाश’ लेखप्रति ओलीले मंगलबार व्यंग्य गर्दै ‘आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढालेका पार्टीसँग एकताको कुरा गरेर जिस्केको’ टिप्पणी गरेका थिए ।
कतिपय राजनीतिक विश्लेषक भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहाल ‘राजनीतिक स्वार्थ’ का लागि कुनै पनि बेला मिलनको हात बढाउने नेता भएकाले सत्ता गठबन्धनबीच अनुकूल चुनावी तालमेल नसके माओवादीले एमालेसँग ‘सम्झौता’ गर्न सक्ने बताउँछन् ।
प्रकाशित : चैत्र ३, २०७८ ०८:०७
शान्त महाधिवेशनबाट शक्ति फर्काउने चुनौती
नीति र नेतृत्वको समीक्षा आफैं गर्ने, निर्मम आत्मालोचना गर्ने र आफूले आफैंलाई थप जिम्मेवारी पनि दिने दाहालको पुरानै शैली हो । यही शैलीअनुसार उनले यसपालि पनि आफू र नेताहरुका लागि पद विभाजन गर्नेछन् ।
पुस १२, २०७८ गंगा बीसी
काठमाडौँ — माओवादीको सातौं महाधिवेशन (२०६९ माघ) मा हेटौंडामा भइरहेका बेला देशमा संविधानका विषयवस्तुमा भीषण संघर्ष भइरहेको थियो । माओवादी र मधेसी एकातिर, कांग्रेस र एमाले अर्कोतिर । माओवादी सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दल रहेको संविधानसभा संविधान बनाउन नसकी विघटन भइसकेको थियो ।
तर माओवादीका सयौं नेता, हजारौं कार्यकर्ता ‘विद्रोहको राप र ताप’ बोकेर हेटौंडामा भेला भएका थिए । हुप्रा चौरमा सातौं महाधिवेशन भव्य उद्घाटन गरेको माओवादीले बन्द भएको हेटौंडा कपडा उद्योगमा बन्दसत्र गर्दा देशमा उत्सुकता थियो ।
हेटौंडा महाधिवेशनले पार्टी र देशको समृद्धिका लागि के कस्ता नीति लिएको थियो भन्ने सम्झना स्वयं माओवादी नेतृत्वलाई नै छैन । तर, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको तत्कालिक नीतिअनुरूप सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर देश चुनावमा गएको थियो ।
तर आठौं महाधिवेशनमा न त्यस्तो रौनक छ न उत्सुकता । राष्ट्रिय सम्मेलनलाई अन्तिम समयमा बढुवा गरेर माओवादीले ‘मौन’ महाधिवेशन आइतबार सुरु गरेको छ । हेटौंडा महाधिवेशन जस्तो प्रतिनिधिको भीडभाड यसपालि छैन, सातौं महाधिवेशनमा सात हजार प्रतिनिधि थिए, यसपालि १६८१ मात्रै सहभागी छन् ।
ठूला राजनीतिक कार्यक्रम होइन, विचार गोष्ठीहरू हुने राजधानीको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु भएको महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै दाहालले ‘क्रान्तिकारी विचार र पार्टी निर्माणका लागि निर्मम’ नीति लिने दाबी गरेका छन् । तीन दशक बढी पार्टीको नेतृत्वमा रहेका दाहालले आफने राजनीतिक प्रतिवेदनमा आत्मसमीक्षा, आत्मालोचना गरेको बताए । ‘विचार संगठन रणनीति कार्यनीतिमा कहाँ चुक्यौ । सबभन्दा बढी आत्मसमीक्षा मेरै गरेको छु । मैले प्रमुख नेताका हैसियतले मभित्र नै खोज्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी कहाँ आइपुगेका छौं । हाम्रा चुनौती के छन् ? सामना कसरी गर्ने ? विषय छन् ।’
दाहालले भनेजस्तै उनले राजनीतिक प्रतिवेदनमा आत्मालोचना गरेको विषयमा कसैलाई पनि शंका छैन । तर नीति र नेतृत्वको समीक्षा आफैं गर्ने, तिखो आत्मालोचना गर्ने र आफूले आफैंलाई थप जिम्मेवारी दिने उनको पुरानै शैली हो । यही शैलीअनुसार उनले नेताहरूलाई पनि पद विभाजन गर्नेछन् । अध्यक्ष दाहाल र सिंगो माओवादीले लिने नीति कति कार्यान्वयन होला भन्नेबारे स्वयं माओवादी नेतामा नै कौतुहल छैन ।
‘खुट्टा हेरेर जुत्ता बनाउने कि जुत्ता हेरेर खुट्टा ?’ एक नेताले भने, ‘अध्यक्ष आफ्नो अनुकूल हुने गरी नीति बनाउनु हुन्छ न कि जनतालाई अनुकूल हुने गरी ।’ हुन पनि महाधिवेशन उद्घाटनकै दिन बिहान विधान संशोधन गरेर माओवादीले एक वरिष्ठ र ६ उपाध्यक्ष, महासचिव, दुई उपमहासचिव र तीन सचिव बनाउने भएको छ । स्थायी कमिटीका सबै नेतालाई पुग्ने गरी पद सिर्जना गर्न माओवादीले विधान संशोधन गरेको हो ।
दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सोमबार बन्दसत्रमा प्रस्तुत हुनेछ । माओवादीको टुटफुट र वैचारिक अस्पष्टताका कारण कमजोर धरातलमा उभिएको महाधिवेशनले आगामी दिनका लागि भने बलियो रणनीति बनाउने नेतृत्वको दाबी छ । ‘समाजवाद उन्मुख समृद्धि हुँदै सामाजिक विकास र न्यायको नयाँ युगतर्फ देशलाई लैजाने, यो देशको सबै उत्पीडित जाति, क्षेत्र, समुदायका हक अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने के उपाय हुन सक्छ ? भन्ने विषयमा नयाँ र परिमार्जित कार्यनीति र रणनीति प्रस्तुत गरिएको छ,’ दाहालले आफ्नो कार्यदिशाबारे बताए ।
सत्ता र शक्तिमा आएपछि माओवादी आधारभूत वर्गबाट टाढिँदै गएको गुनासो छ । सशस्त्र संघर्ष गर्नुअघि र त्यसपछि श्रम शिविर गरेर आकर्षित गरेका माओवादी पछिल्लो समय श्रम नगरी लाभ लिने अवस्थामा पुगेको दाहालको प्रतिवेदनमा छ । ‘यो संविधानमा जे परिकल्पना गरेका छौं, पहिले आफैं बदलिनुपर्छ । पार्टी बदलिनुपर्छ । जनतासँग जोडिने श्रमसँग जोडिने काम गर्नुपर्छ र उत्पादन श्रम र संस्कृति अभियान सुरु गर्नुपर्छ,’ दाहालले अघि सारेको नीतिमा उल्लेख छ ।
नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले महाधिवेशनले राजनीतिक कार्यदिशाका रूपमा चार काम गर्ने बताए । उनले राजनीतिक कार्यदिशामा ‘समाजवाद उन्मुख एक्काइसौं शताब्दीको स्पष्ट मोडेल’ सहित तत्कालीन काम अघि सार्ने बताए । ‘पार्टीलाई विधि पद्धतिमा चलाउनुपर्‍यो । सामूहिक ढंगले चलाउनुपर्‍यो । व्यक्तिवाद गुटवादविरुद्ध जानुपर्‍यो,’ उनले भने ।
माओवादीमा भ्रष्टीकरणको प्रभावबाट मुक्त पार्ने गरी छलफल हुने उनको भनाए छ । ‘समाज भ्रष्टीकरणको प्रभाव हाम्रो पार्टीमा पनि छ । त्यसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ,’ उनले थपे ।
‘शोषित पीडित वर्ग र जनतासँग सम्बन्ध घट्दै गएको छ । दलाल नोकरसाहीसँग सम्बन्ध बढ्दै गएको छ । त्यसलाई समीक्षा गरेर आमजनतासँग सम्बन्ध गाढा गराई उनीहरूको हित हेर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने । उनले महाधिवेशनले यी विषयमा केन्द्रित भएर नीति तय गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए । ‘यी काम गर्न सक्यौं भने क्रान्तिकारी पार्टी बनाउन सक्छौं । समृद्धि र समाजवादको नेतृत्व गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘हैन भने यो पार्टीको औचित्य नै गुमाउँछौं । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
कार्कीले फरक मत राख्ने
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रतिवेदनमाथि नेता राम कार्कीले फरक मत राख्ने भएका छन् । स्रोतका अनुसार उनले फरक मत बन्दसत्रमा वितरण गर्न आग्रह गर्दै दाहाललाई बुझाएका छन् ।
‘मैले अध्यक्षलाई आगामी कार्यदिशाबारे प्रतिवेदन बुझाएको छु,’ कार्कीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अध्यक्षले बन्दसत्रमा वितरण गर्नु हुन्छ कि हुन्न सोमबार थाहा हुन्छ ।’ आइतबार बिहान केन्द्रीय समिति बैठकमा कार्की, परशुराम तामाङ, धर्मनन्द देवकोटाले फरक मत राख्न पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘हाम्रो विचारमा दमन नगरियोस्’ बैठकमा उनीहरूले भनेका थिए ।
प्रकाशित : पुस १२, २०७८ ०७:०१